Skewers inkukhu webele - kwasemini okulula okuphekiwe amalahle
Skewers of inkukhu webele kuvela esihlwabusayo kakhulu, namanzi futhi ewusizo. Phela, emhlophe inyama yenkukhu inomsoco ikakhulukazi kanye okusezingeni eliphezulu amaprotheni. Kuyaphawuleka ukuthi ukudla okunjalo ngamalahle Kunconywa ukuba asebenzise hhayi kuphela inkukhu, kodwa futhi nezinye izithako ukuthi uzokunika kebab ukunambitheka ekhethekile futhi iphunga.
Recipe skewers inkukhu webele
ukhilimu obukhulu A 35% - 210 g;
webele fresh chilled - 4 kg;
imifino - pair lwemishayo;
onion esikhulu - 4 PC.
usoso utamatisi okubabayo - 3 nezinkezo ezinkulu;
usawoti iodized - 2 dessert nezinkezo;
allspice uphizi - 12-16 PC.
Ngaphambi kokwenza skewers inkukhu webele, kufanele kahle wageza, ebugqilini amathambo, uqwanga kanye isikhumba, bese uthathe tincetu eside futhi mncane kakhulu. Ngemva kwalokho, kuyinto efiselekayo ukushiya inyama ohlangothini futhi aqhubeke ngokushesha ukulungiswa sauce enongiwe, lapho fillet kufanele marinate amahora mayelana 3-4.
Skewers inkukhu amabele: marinade nokupheka
Ukwakha sauce edingekayo endishini ukuxubanisa obukhulu 35% -th ukhilimu omuncu, imifino oqoshiwe, okubabayo utamatisi unama, usawoti iodized, uthathe izindandatho isibani anyanisi, amnandi pepper kanye soy sauce. Zibekwe izithako udinga uhlanganise ngesipuni enkulu, bese uqhubekela phambili zokuyithambisa inyama. Kuze kube yimanje, izingcezu inkukhu webele ufuna wafaka i isitsha koqweqwe lwawo, enezele futhi sauce ngaphambilini walungisa, uhlanganise ngesandla, ikhava bese ushiye eceleni 3-4 amahora. Phakathi nalesi sikhathi, esithambile futhi tender inyama emhlophe yenkukhu zidla flavour zamakha, kuyoba esihlwabusayo ngaphezulu kanye namanzi.
Ukukhweza isifuba on skewers
Skewers inkukhu webele kufanele Fry birch noma i-oak amalahle. Ngemva anika ukushisa kuqala, kufanele ngokushesha aqale ukuphoqa inyama on skewers. Kulokhu, izingcezu umucu edingekayo ukugqoka kanye imikhawulo ezilenga futhi ayishise. Onion izindandatho angasetshenziswa ukuze kusebenziswe amalahle. Kodwa sibalandelanise is hhayi Kunconywa nge inyama, njengoba zikhanyiswe phambi umucu ithenda. Ama zingcono ibekwa uhlomo Ihhotela upheke kubo phezu hlupha angaphansi kwamaminithi 5-9.
ukwelashwa ukushisa ukudla
Skewers inkukhu webele iba ezithambile kanye crispy kakade emva kwemizuzu 20-30 ngemva kokuba ifakiwe phezu kwamalahle avuthayo. Ukuze lithole ukuthi lezi isidlo usulungile, kubalulekile ukwenza imbobo ngommese iqatha lenyama kute ukhone kubuka, oozing igazi noma cha. Uma amabele aphume ijusi ecacile elimnandi, izoso elingangena ngokuphepha asuswe izoso futhi ukukhonza izivakashi.
Inkukhu webele, ngosile emalahleni, bayakhuthazwa ukusebenzisa etafuleni esishisayo ne imifino kanye namakhambi. Kufanele kuqashelwe ukuthi le akuyona ukudla esindayo kakhulu kungenziwa obubekwe ngaphambili futhi ophanayo side dish amazambane abilisiwe noma ngayinyomfoza ngayiphosa, irayisi, nokunye okufana nokolweni, pasta nokunye. Kukhona skewers white inyama yenkukhu, qiniseka ukusebenzisa usoso utamatisi noma isoso.
Amazambane nge inyama - njalo kukho ngokuwina etafuleni lakho
Pie-shifter ne apula. Apple pie: zokupheka, izithombe
Ukupheka nge okumnandi kakhulu nge ushizi
Indlu Uhulumeni - kuba ejele, isibhedlela, noma benzenjani?
Indlela yokusebenzisa bakhohlise Engine
Amaphupho zabantu - ezikulu nezincani
Le nkampani "Tentorium": Izibuyekezo Mkhiqizo
Amaqembu ezombusazwe Russia ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ukwakheka amaqembu ezombusazwe eRussia
Amagama nge izimpande "lag" - "amabhokisi": izibonelo kanye nemithetho yokubhala
Ikhekhe nge-apula nekharameli: ukupheka izimfihlo
Amathiphu ambalwa ngalokho ukupheka e multivarka nengulube